Wepamusoro 3 Kushambadzira Kukanganisa Mabhizinesi Matsva Gadzira | Martech Zone
Nei wakatanga bhizinesi rako? Ini ndichatengesa iyo purazi iyo "nekuti ini ndaida kuve mushambadzi" yanga isiri mhinduro yako. Nekudaro, kana iwe wakaita semazana evaridzi vemabhizimusi madiki andakashanda newe pamwe wakaziva nezve masekondi makumi matatu mushure mekuvhura kwako mikova kuti kana iwe ukasava mushambadzi, iwe hausi kuzove muridzi webhizinesi diki kwenguva refu. Uye, chokwadi chinofanira kuudzwa, icho chinokushungurudza nekuti haufarire kushambadzira uye zvinokukanganisa kubva kune dzimwe nzvimbo dzebhizimusi rako.
Zvakanaka, ndine mamwe mashoko akanaka. Kunyange pasina nzira yekubvisa kudiwa kwako kushambadzira bhizinesi rako, unogona kubvisa kushushikana kwako kwakawanda nekugadzirisa matatu epamusoro ekutengesa zvikanganiso zvandinoona mabhizinesi achigadzira.
Mistake # 1: Tarisa pane Akashata Metric
Iko kuwanda kwedata kunowanikwa kuongorora kushambadzira nhasi kuri kufunga. Google Analytics, pachayo, inopa yakawanda data zvekuti iwe unogona kudya kupera kwevhiki kwese uchingoiongorora - chete kuti uzviwane pakupedzisira zvinotungamira kumhedziso dzinopesana zvichienderana nedata raunokoshesa iwe. Uye ingori data rewebsite yako! Kumhan'arira kushambadzira kwedhijitari, vezvenhau enhau uye dzimwe nzvimbo dzekutengesa zvakangotyisa uye zvinopesana.
Kuve nekuwana kune rese iro data chinhu chakanaka, asi icho chinogona kushandira kutsausa varidzi vebhizinesi diki kubva kune iyo data inonyanya kukosha. Ndosaka zvichikosha kudzora tarisiro yako kusvika kune maviri chete mametric ayo anova nebasa kana zvasvika pakushambadzira: Mari yekuwana Mutengi uye Hupenyu Hwose Kukosha kweMutengi. Kana kuyerera kwemari iri nyaya iwe uchazoda kutarisa paMwedzi kana Yegore Kukosha kweVatengi pane iyo Hupenyu Hwose Kukosha, asi iyo yakakosha musimboti yakafanana. Kana kukosha (kureva mari) yemutengi kuri kwakanyanya kudarika mutengo wekuwana mutengi, uri muchimiro chakanaka. Mabhizimusi anobatsira haana kuvakirwa pane zvisina maturo metriki senge kubaya, zvinowoneka uye kufarira. Mabhizimusi anobatsira anovakwa kuburikidza nemametric ayo anogona kunyatso kuiswa kubhangi, saka tarisa pfungwa dzako pane idzodzo.
Mistake # 2: Tarisa pane Akashata Tactics
Hapana chaipo kushomeka kwemaitiro uye maturusi ayo mabhizinesi madiki anogona kushandisa avo ekushambadzira madhora nhasi. Nehurombo, mabhizinesi madiki akawandisa anongogadzirira chete kune echinyakare maitiro uye anofuratira akakosha ekutengesa matekiniki. Ivo vanoisa nguva yavo yese uye mari kumatekiniki ayo anogadzira anodikanwa, vateveri, uye anovhura nepo vachiregeredza akakosha matekiniki anotungamira kutendeuka, kuchengetedzwa kwevatengi, uye mukurumbira wepamhepo unoburitsa madhora. Mhedzisiro yacho chirongwa chekushambadzira chinovachengeta vakabatikana uye vachinzwa zvakanaka asi chirevo chemari chinovaita vanorwara nedumbu ravo.
Panzvimbo pekumhanyisa dzese dzinopisa kushambadzira, varidzi vemabhizinesi madiki vanofanirwa kutanga vatanga kuwedzera mari kubva kune vako varipo vatengi, kuwedzera iyo muzana yemitobvu inova vatengi, uye kuendesa ruzivo rwevatengi runogadzira vateveri vanopenga. Izvo zvakakosha ndiyo hwaro hweinobatsira, isina kushushikana bhizinesi. Ivo chaivo havangaite kuti bhizinesi rako rive rinotonhorera sekusvetukira pane inopisa nene social media bandwagon, asi ivo vachakuitira mari - uye handizvo here chikonzero iwe wakatanga bhizinesi rako pakutanga?
Mistake # 3: Tarisa pane Akashata Brand
Kwemakore gumi apfuura, simba rekutsanangura bhizinesi 'brand rakachinja kubva kubhizinesi kuenda kune vatengi. Makumi gumi apfuura mabhizimusi akapfuura nemumabasa ekurwadzisa kuti vatsanangure mhando yavo uye vobva vashambadzira kushambadzira kuti vaudze vatengi zvavaifunga kuti rudzi rwavo rwaive. Izvo zvese zvachinja. Munyika yanhasi, vatengi vanotsanangura bhizinesi 'mhando uye inoshandisa tekinoroji uye midhiya enhau kutaurira bhizinesi - pamwe nemazana, kana asiri zviuru, zvevamwe vatengi - kuti chaiko chiratidzo chavo. Uye vanozviita 24/7/365.
Nehurombo, mabhizinesi mazhinji (ese makuru uye madiki) atadza kugadzirisa kushambadzira kwavo kuratidza shanduko iyi. Vanoenderera mberi nekutarisa kushambadzira pakuudza nekutengesa. Vanotumira akawanda maemail, template maposikadhi, uye vanovimba nezvikodzwa kuti vachengetedze vatengi vavo. Vatengi-vakatsanangurwa mhando, kune rumwe rutivi, tarisa kushambadzira kwavo pane yevatengi ruzivo uye hukama. Ivo vanotumira yekutenda zvinyorwa, kugutsikana maemail uye kuendesa inoenderana, yepasirese-ruzivo ruzivo kuchengetedza vatengi vavo.
Matekiniki acho akafanana, asi tarisiro yacho yakasiyana. Kutanga nekutsanangura chiitiko chaunoda kuendesa kune ako vatengi uye wozovaka kushambadzira kwako kutenderedza kusimudzira icho chiitiko uye kwako mashandiro ekutenderedza pairi. Hapana kana chakakanganisika nekufunga izvo zvaunoda kuti zita rako rive, asi pakupera kwezuva vatengi ndivo vanozosarudza kuti ndizvo chaizvo zvazviri.
Tags: muchisomaemail mazhinjikuchengetwa kwevatengikukanganisagoogle analyticszvinoisametrics ekushambadziranzira dzekutengesakushambadzira maitiroevanhu vezvenhauTechnologytemplate maposikadhi